ကျောက်စိမ်းစျေးကွက် - မန္တလေး | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
မန္တလေးမရှိခရီးစဉ်, မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်စရာမလိုဘဲပြည့်စုံဖြစ်ပါသည် ကျောက်စိမ်းစျေးကွက်.
တရုတ်ထံမှအဓိကအားဖြင့်ကြွလာတော်မူသောဂန္ထဝင်သို့မဟုတ်ဘုံကျောက်စိမ်း nephrite ဟုခေါ်သည်, ကျောက်စိမ်းသော်လည်း, ကျောက်စိမ်းများ၏အလွန်ရှားပါးတဲ့အမျိုးအစား, မြောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှလာ. မြန်မာကျောက်စိမ်းကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးကျောက်စိမ်းဖြစ်ခြင်း၏ခေါင်းစဉ်ကိုရရှိထားသူ. ဒါဟာမြင့်မားအဖြူကနေအနက်ရောင်မှ Emerald အစိမ်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်မှတဆင့်အထိယင်း၏အနီးတွင်ပွင့်လင်းသောအရောင်အဆင်းအဘို့ဆည်းကပ်နေသည်.
မြောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်တူးဖော်ကျောက်စိမ်းအများစုဟာလက်ဝတ်ရတနာများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုရန်အခြားအာရှနိုင်ငံများအဓိကအားဝင်. သင်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအများစုအဓိကအားရာအရပ်ကိုကြာဘယ်မှာထင်လဲ. သင်ကမှန်းဆ, မန္တလေးရဲ့ကျောက်စိမ်းစျေးကွက်အတွက်.
ကိုယ့်စျေးကွက်အပြင်ဘက်အလုပ်သမားများ၏မိုဃ်းလင်းအဖွဲ့များထံမှထို့နောက်ပုံနေသောသေးငယ်သည်အပိုင်းပိုင်းသို့ကျောက်စိမ်းများ၏လုပ်ကွက်ဖြတ်တောက်စတင်ရန်, ခွဲထားခဲ့သည်နဲ့ပွတ်. အဆိုပါပွတ်လုပ်ကွက်များနှင့်ကျောက်မျက်ထို့နောက်ပုံမှန်အားဖြင့်မနက်9နာရီဝန်းကျင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတက်သည်ဖွင့်လှစ်သောဈေးကွက်သို့ရွှေ့.
စျေးကွက်အတွင်း၌သင်သည်အနိမ့်အဘို့ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိ, အလတ်စားနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ကျောက်မျက်. သငျသညျလူအသုံးအုပ်စုများလည်းရှိ; ဝယ်လက်, ရောင်းသူနှင့်ပွဲစားများ. သင်သည်သူတို့ဝယ်ယူလိုတဲ့ကျောက်မျက်၏နမူနာတခု display ကိုအတူစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ထိုင်လျက်ဝယ်လက်များ၏အတန်းအပေါ်သို့တန်းမြင်ရပါလိမ့်မည်. ပွဲစားများသူတို့လိုအပ်ဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ကြည့်ကြပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီဝယ်ဘို့လက်ျာရောင်းချသူကိုရှာဖွေပယ်သွားပါ. ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကျောက်မျက်များ၏အရည်အသွေးဝယ်အားဖြင့် check လုပ်ထားသည်ထို့နောက်ညှိနှိုင်းစတင်ခဲ့သည်.
သငျသညျ display ကိုအပေါ်မိမိတို့၏ဥစ္စာနှင့်အတူရောင်းသူအုပ်စုများလည်းမြင်ရပါလိမ့်မည်. သတိ၏စကားလုံး, သငျသညျကျောက်စိမ်းအကြောင်းကိုဘာမှမသိရပါဘူးလျှင်သင်ဒေသခံတစ်ဦးရတနာသွားချွတ်ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ဤအရပ်ဌာနကို၎င်းပညာရှင်များအဘို့ဖြစ်၏.
ကို J ၏ဗဟိုမှာတော့Ade Market က သငျသညျကဖေးကိုတွေ့လိမ့်မည်, ကော်ဖီဆိုင်များနှင့်ပင်လေထုဟော်ကီ – အဖိုးတန်ကျောက်စိမ်းအတွက်ဆက်ဆံ၏စိတ်ဖိစီးမှုကနေကြွင်းသောအရာလိုအပျကွောငျးသူတို့အဘို့ရေကူးကန်စားပွဲ.
တစ်ဦး 1,000K ရှိပါတယ် – $1 နိုင်ငံခြားသားများစျေးကွက်ဝင်ရန်အဘို့အဝင်ပေါက်ကြေး.
သင်ကျောက်စိမ်းနေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း – မန္တလေးတွင်ရတနာစျေး – Google Maps
သငျသညျလှပသောမြန်မာကျောက်စိမ်းကြည့်ရှုတချို့အချိန်ဖြုန်းနဲ့မြင်ချင်လျှင်အရေးယူတစ်အုံထွက်စစ်ဆေးနေ၏ဆက်ပြောသည်ဆုကြေးငွေနှင့်အတူကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်ကျောက်မျက်သို့လှည့်, မန္တလေးရဲ့ကျောက်စိမ်းစျေးကွက်မှဆင်းပေါ်ဦး, ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖွစျလိမျ့မညျ.